ဒေါက်တာ အရှင်နာယက ( USA) နှင့် A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်း) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ။ ~ Arakan Student Monks Association
ဒေါက်တာ အရှင်နာယက ( USA) နှင့် A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့ (ထိုင်း) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ။
2:13 AM ASMA မွတ္တမ္း, ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္း No comments
ဒေါက်တာအရှင်နာယက ( U.S.A) နှင့် A.S.M.A ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(Thailand)တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ၊ သြဝါဒခံယူပွဲ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ မဟာချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ်တွင် တခမ်းတနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဒေါက်တာအရှင်နာယက(အမေရိက)မှ အမေရိကန်နိုင်ငံ နှင့် အနောက်ဥရောပရှိ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့် အသိပညာဗဟုသုတများ ၊ ရဟန်းတော်များနှင့် လူသားအကျိုးပြုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရအခန်းကဏ္ဍများကို မေတ္တာစေတနာကြီးမားစွာဖြင့် ရှင်းလင်းမျှဝေ သြဝါဒပေးခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်ရဟန်းတော်များမှလည်း သိလိုသည်များကို ဒေါက်တာအရှင်နာယက ဆရာတော်ဘုရားအား မေးမြန်းလျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။
မဟာချူလာတက္ကသိုလ်၏ Language Institute နှင့် A.S.M.A (Thailand) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားသော Academic Writing Course (AWC) သင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပညာဒါန မ့တည်ငွေ ဘတ် ၁၅၀၀၀ ( တစ်သောင်းငါးထောင်) လှူဒါန်းပေးပါသော ဒေါက်တာ အရှင်နာယက(USA) အား A.S.M.A (Thailand) အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ။ ၃ . ၉. ၂၀၁၈